Maitiro ekuchera maDogecoins (Kuisa uye kushandisa) | Kubva kuLinux
Maitiro ekuchera Dogecoins (Kuisa uye kushandisa)
IvanLinux | | Dzidziso / Mabhuku / Matipi
ari virtual currency Ivo vava fashoni munguva pfupi yapfuura, inonyanya kufarirwa ndeiyi:
Asi isu tichaisa pfungwa pane imwe kunyanya:
1.1 Sei zvichiita kunge meme kwandiri? ee
2 Kuchera paLinux (Yakakurudzirwa kuti ishandiswe pane x64 masisitimu):
3 Changu pa Android:
Sei zvichiita kunge meme kwandiri? ee
Nekuti yakavakirwa pane inozivikanwa Internet meme «DogeNdeipi imbwa Shiba Inu. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve kushanya kwemari: Dogepedia Wikipedia
Kuchera paLinux (Yakakurudzirwa kuti ishandiswe pane x64 masisitimu):
Kune yangu tinofanirwa kuisa zvinotevera kutsamira:
PaUbuntu kana zvigadzirwa (Zvichida zvinoshanda paDebian):
Tinodhawunirodha pasuru ne SRC:
Unzip iyo .tar.gz:
Enda kune cpuminer-2.3.2 dhairekitori:
Gadzira iyo Makefile:
Iwe unofanirwa kutsiva «mushandisi» «mushandi» uye «password, kune izvi tinoenda kune inotevera webhusaiti uye kunyoresa: Kunyoresa Peji
Kana tangonyoreswa, isu tinofanirwa kuenderera tichiongorora account yedu neemail iyo inosvika kuaccount yako. Kana iyo account yagadziriswa, tinopinda.
Iwe uchazviwana iwe uri muDashboard, pano isu tinopinda chikamu cheVashandi Vangu, mukati meVashandi Vangu tichagadzira Mushandi ane zita uye password yaunoda. Kana izvi zvaitwa isu tinoenderera mberi nekugadzirisa unotevera kuraira:
Isu tinotsiva "mushandisi" nemushandisi wawaishandisa kunyoresa mu nut2pools, "mushandi" nezita reMushandi ratakasika kare uye "password" ne password yeMushandi ASI yemushandisi.
Ready! Iwe watove kuchera, iwe unogona kuona huwandu hwe Dogecoins kuchera muDashboard
Changu pa Android:
Kune yangu paApple tinogona kuisa rinotevera app kubva kuGoogle Store.
Kana tangoiswa tinoenda kune inotevera webhusaiti uye kunyoresa: Kunyoresa Peji
Iwe uchazviwana iwe uri muDashboard, pano isu tinopinda chikamu cheVashandi Vangu, mukati meVashandi Vangu tichagadzira Mushandi ane zita uye password yaunoda.
Kana izvi zvaitwa, isu tinovhura DroidMiner.
Mu «Mining Pool URL» isu tinoisa:
Mu "Username" iwe unoisa rako rekushandisa zita reiyo peji iyo iwe yawakanyoresa kare, nguva uye zita reMushandi iwe wawakagadzira, Muenzaniso: mushandisi.worker
Mu «Pasiwedhi» password yeMushandi ASI yemushandisi.
Mu «1», sarudza iyo nhamba yemakoresi ane yako nhare.
Sarudza sarudzo «LTC / DOGE / XPM» uye bata «Kutanga»
Waita, iwe uri kuchera! unogona kuona huwandu hwe Dogecoins kuchera muDashboard
Iko kune zvakare mukana wekuchera Dogecoins muMS Windows, asi sezvo iri blog iri Mahara Software, isu hatiise maitiro. 😉
Pss yangu Dogcoins kero 🙂 DAQVhckjg72YsLWXTGUqzu46gbH9Phcq79
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » Maitiro ekuchera Dogecoins (Kuisa uye kushandisa)
Inonakidza iyi nyaya yeVirtual Mari. Sezvo ini ndisingazive chero chinhu nezve economics, ini handinzwisise kuti vanogona sei kuve nechero kukosha. Izvo hazvidi izvozvo backup, iti mugoridhe kana chimwe chinhu chesimbi?
Ini ndanga ndagara ndichinzwa nezveBitcoins, asi ini ndinoona kuti kune dzimwe nzira dzakawanda .. ini ndichafanirwa kuchera zvakadzama mune iyi nyaya kuti ndione kuti zvakaita sei.
Iniwo ndinoona kuti "kuchera" kunoda kuziva. Haina muganho here? Ini ndingaite mari zvisingaite?
Pafungidziro ine muganho. Iyo poindi ndeyekuti poindi inosvika apo mari isingachagone "kugadzirwa" kunze kwemweya mutete.
Mazuva ano mari dzese, chaidzo kana kwete, dzinongokosha chinhu nekuti kune vanhu vanotenda kuti chakakosha chimwe chinhu, uye vanobvuma kubhadhara mune imwe mari nekuti vanotenda kuti mari iyi ichatambirwa nemumwe munhu kuti avape iyo zvakanaka kana sevhisi. Kufungidzira kwakachena, wow.
Hechino chinyorwa chakanakisa icho chinotsanangura kuti ndeupi mukana wakanyanya wemari dzechinyakare kupfuura chaiwo:
"Ivo vanongokosha chimwe chinhu nekuti kune vanhu vanotenda kuti chimwe chinhu chakakosha chimwe chinhu, uye vanobvuma kubhadhara mune imwe mari nekuti vanotenda kuti mumwe munhu achazogamuchira mari iyoyo kuti avape zvakanaka kana sevhisi"
Whoops! Chaizvoizvo senge nemari chaiyo ...
Hapana anotevera chiyero chegoridhe, kana chero imwe. Izvo zvakavakirwa pavakatemerwa (kwavanobva "kuvimba") ndeimwe mari "inonzi" yakasimba ...
Pindura kune drarko
«Nhasi mari dzese, dzakapotsa kana kwete ...»
Hector Quispe akadaro
Parizvino mari dzese dziripo. (chaicho hachisi checomputer chete)
Pindura Hector Quispe
Kuchera kwakafanana nekushandira mari yesimbi. Iwe unopa chikamu chako chekomputa kugona kune iyo cryptocurrency network, kuitira kuti igone kuita bhizinesi rayo, uye mukudzoka vanokubhadhara nemari iyoyo. Zvirinani ndizvo zvandanzwisisa.
Mhoro Elav, aimbove mari aikodzera simbi yavakagadzirwa uye kusanganisa kwesimbi iyo kunogona kutungamira kune nyika kupunzika uye mhirizhonga zhinji. Shure kwaizvozvo, mari dzesimbi dzakatanga kuverengerwa pachiyero chegoridhe, zvinoreva kuti mari imwe neimwe "yakakosha X peso yegoridhe" asi kubva pakaitika dambudziko remafuta ra1973 (iwe pawaive mwana xD 😛) mari idzi hadzifanirwe value inotsigirwa nechero chinhu, ese ari ekufungidzira uye "chivimbo chekuti nyika irikubhadhara ichakubhadhara." (Izvi zviri pamusoro, pamusoro uye ini handikukurudzire kuti uverenge pawikipedia nekuti nyaya iyi yese yakanyorwa kunge dhongi).
Sezvo hupfumi hwese hwave zvino hwakavakirwa padhora, United States inogona kuzvibhadharira pamutengo wekudzikisa mari yayo kubhadhara iyo yainokwereta. Izvo zvinowanzonzi "kudhinda matikiti." Nekudaro, sezvo dzimwe mari dzese dzichienderana nedhora, vanomanikidzwa kudzikisira kuitira kuti vasanyanye kudhura mumusika. Kuti ndikupe zano, EU, Japan neUS vanga vachidhinda mabhiri kwemakore nemakore vasingamire nekuti vanoedza kuchengetedza mari yacho kuti igadzikane ... asi rimwe zuva izvi zvichaputika uye iwe uchango bvisa muCuba yekusave nehupfumi semusika wakadai (uye ichakupwanya zvechokwadi).
Zvakawanda kana zvishoma kudaro.
Kuchera kunogona kucherwa izvo zvakarongedzwa mualgorithm yemari, pakutanga mazhinji anogadzirwa aine mashoma zviwanikwa uye zvakawedzera uye zviwanikwa, muganho uri kuwedzera zvishoma nezvishoma.
Hapana mari ine tsigiro chaiyo asi inhema, ndinoreva chivimbo chauinacho munyika chakachipa kana sangano. Iyo dhora kwemakumi emakore haichateedzere chiyero chegoridhe uye zvimwe zvese zvimwe.
Ndinovimba ini handiite zvekukanganisa zvehunyanzvi.
Hazvina kufanana nezvamunotaura, mari senzira yekutonga yakavakirwa pane chivimbo chinogadzirwa nehupfumi hwenyika, asiwo kukosha kwayo kunodzorwa nehurumende, muenzaniso wakajeka ndewakaitika apo Obama akaudza mutungamiri weChinese kuti aende kudzikisira mari kuti ubatsire kunze kwenyika, kana chinhu chimwe chete icho Venezuela inoita nekukoshesa mari yacho. Mumwe muenzaniso wakajeka ndewokuti pakati penjodzi munzvimbo yeEuro, iyo Euro yen chiyero chekutsinhana chakadonha kune zvakadzikira, zvese zvinoenderana nekuvimba kunogadzirwa nenzvimbo kana nyika, uye nerutsigiro rwayo mune zvehupfumi.
Bitecoins yakavakirwa zvakapusa kana vashandisi vachichida kana kwete, kufarira kwavanoisa pavari hakuna kufananidzwa nemari chaiyo.
Kukahadzika kuviri chete: 1) Maargarisms atichagadzirisa kuti tiwane maDogecoins anoshandiswa nei? 2) Pane graphical interface yeKDE?
Kana zvikashanda, zvezvinhu zvakawanda ... ferefeta 😀
uye ndinoshamisika kuti sei iwe uchida graphical interface?
Wow! Mari Yakawanda, Zvakapfuma
Ndanga ndichichera Dogecoins kwechinguva, asi ndichishandisa cgminer pachinzvimbo checumin (kushandisa mukana wekuti ndine AMD GPU: D) [mari zhinji, yakapfuma kwazvo, yakawanda kwazvo crypto]. Kana iwe uchida, ini ndinogona kutsanangura maitiro ekuchera nenzira iyoyo.
Nenzira, hauzive here imwe nzira iri nyore yekuve neDogecoin wallet pane linux pasina kutora uye kuumbiridza kubva kuGit zvakananga? Ndinoshuva dai paive nenzvimbo ... Ah mira, yambuka iyo kunze, ini ndawana XD repository https://launchpad.net/~cwayne18/+archive/doge
Chinhu chinonakidza kuwana mari "kubva pasina", asi kana ichienzaniswa neyechinyakare mari haina kukosha zvakanyanya ... Chinhu chega munhu chaanogona kutarisira ndechekuti iyo cryptocurrency inozokoshesa kana ... kumirira echinyakare mari kuti idzikise. Ini ndinongomirira zuva ratisingachazovimbe nerumwe rudzi rwemari kuti tirarame (kana kuti ma cryptocurrencies ndiwo chete ane chero kukosha chaiko).
Pindura kuna HaPK
Kubva pakuona kwangu semucherechedzi, mari dzese dzanhasi, chero zvazvingava, zvinoita senge kwandiri kuti vari kutsigira zvakanyanya muhupfumi uye negoho renyika kana boka, saka United States inogadzira nekutengesa zvinhu zvekukurumidza kufarira kunokosheswa kuve musika unounza purofiti
Imwe pfungwa kana mubvunzo unomuka kwandiri, mangani zvitoro zvepamhepo zvakatengwa nemhando iyi yemari? Ndekupi kwandingatenga semuenzaniso neDogecoins?
Haisi mune zvitoro zvaunogona kutenga ne dogecoin .. Chinokosha kushandura Dogegoin yeBitcoin uye wozoziva .. Pamwe iwe unotenga muzvitoro neBitcoins kana iwe unozvitumira kuakaundi yako yebhangi: D.
Unogona kushandura Dogecoin kune Bitcoin pano: https://bter.com
Ndiyo yandinoshandisa pasina matambudziko
Hechino chimwe chinhu chisipo .. Isa iyo dogecoin chikwama pane yako system. Ndosaka ndaisa dzidziso ...:
sudo kukodzera kugadzirisa && sudo apt-tora kuisa libssl-dev libdb-dev libdb ++ - dev libqrencode-dev qt4-qmake libqtgui4 libqt4-dev libboost1.48-dev libminiupnpc-dev libminiupnpc8 libboost-system1.48-dev libboost-fileystem dev libboost-program-options1.48-dev libboost-thread1.48-dev libboost-chrono1.48-dev kuvaka-kwakakosha git
Uye voila 😀
zypper mu libopenssl-devel kukurudzira kukurudzira-devel git libdb-4_8 libdb-4_8-devel libqt4-devel
Usati waisa iyo yekuraira iyo inofanirwa kugadzirisa iyo MAKEFILE. Muchikamu cheINPPATH, wedzera kumagumo kwetambo izvi: -I / usr / include / db4.8
Chii chinonzi portfolio?
Nenzira yeDebian kumhanya uye "kuchera" 🙂
Kuve nemari yako pane pc yako uye kwete muinternet inomiririra 😀
Javier Yañez akadaro
Iwe unozviziva izvo kana uchiita mirairo
-e kutaura # 1, hunhu 1: isingazivikanwe odha: " "
mune yega yega mirairo.
uyezve kana ndichiita iyo "make" ini ndinowana izvi:
*** Hapana tarisiro yakatsanangurwa uye hapana makefile yakawanikwa. Kumusoro.
Pindura Javier Yañez
Ini handizive izvi chaizvo, asi poindi ndeyekuti maBitcoins anotoenda kuSLI anosvika kumakadhi mana kana ndisina kuverenga nemazvo nekuti matambudziko esvomhu anochinja uye zviri kuwedzera kuomera PC kuzvigadzirisa ... maonero iyo Hardware inodhura pamwe neyazvino yashandiswa mukuita haina kunyanya pamusoro pekukosha kwechero mari yauri kuzowana.
Dambudziko iro rinogadziriswa nePCP
Nemurairo wekupedzisira ini ndinowana izvi:
"./Minerd: unsupported non-option nharo 'user.worker: password'
PS: Ini ndakatsiva "mushandi" "password" uye "mushandisi", asi zviripachena handigone kuzvitsikisa. Chii chinoitika?
Une chokwadi here kuti wanga usina kukanganisa?
$ ./minerd -url stratum + tcp: //dogeu.nut2pools.com: 5585 –userpass mushandisi.worker: password
Rangarira kuti kune iyo--url uye -userpass nharo
Pindura kuna IvanLinux
pane peji rekunyoresa wakagadzira mushandi wako nenzira kwayo? Ndakazviita pasina kana dambudziko
Kuchera ... ndatenda nemupiro.
wow yakawanda mari
doge yakadaro inobatsira zvikuru
saka crypto wow
MuArch Linux iwe unowana iyo package muAUR.
Yakanaka dzidziso izvozvi nguva dzese pandinoda kutanga kuchera zvakare ndinofanira kuita nhanho imwe neimwe kana kuti ndotangira kupi.
uye chii chandingatenga nemari iyi ye crypto?
Iyo inotsinhaniswa neye bitcoins, iwe unogona kuchinjanisa bitcoins nemadhora kana mune dzimwe nzvimbo iwe unogona kuishandisa.
Kana iwe uchida kukwirisa zvakare iwe enda kufolda, ita screen uye unyore iwo wakareba kuraira uyo unosanganisira mushandisi wako, mushandi wako uye mushandi password.
Iwe unogadzira sei kero yeruzhinji?
Mune kero yemari inoiswa?
Allan herrera akadaro
Pamusoroi, asi chinongedzo chepeji rekunyora hachishande, mumwe munhu angandipfuudza iyo URL PLEASE?
Pindura kuna Allan Herrera
WILLIAM E MABHANGI akadaro
Ini ndinotenda ruzivo urwu rwuri rwechinyakare uye / kana iyo nut2pools «saiti» yakafa! Anogadziridza angave anotyisa asi kana iyo nut2pools «saiti» isisipo ini ndinofungidzira kuti poindi ndeyemhepo!
Pindura kuna WILLIAM E BANKS
ExMplayer: Multimedia mutambi ane 3D rutsigiro, Facebook uye zvakawanda
AjudaLinux! Mhando 0.2.0!